သင့်ရဲ့နာရီအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » သင့်ရဲ့နာရီ - ဖုန်းကိုစွဲ tracker နှင့် controller ကို
သင့်ရဲ့နာရီ - ဖုန်းကိုစွဲ tracker နှင့် controller ကို APK ကို
တစ်ခါတလေသင်ပိုပြီး & ပိုပြီးစွဲသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်နေရန်မတတျနိုငျရတဲ့နေကြသည်ဟုခံစားရသလဲ? သင်သည်သင်၏အနားမှာသင်၏ဖုန်းနှင့်အတူနိုးထလာမည့်သငျသညျကအတူအိပ်။ ဖြစ်ကောင်း, သင့်ရဲ့ဖုန်းအားလုံးအချိန်များတွင်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးသင့်ရဲ့အဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး & ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝထိခိုက်ဒီဖုန်းစွဲလမ်းသည်နောက်ကျရသနည်း ထိုအခါမှသာမိုဘိုင်းစွဲသင့်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုစမတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြေရှင်းချက်တယ်ပြီနည်းသင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရှိအချိန်သေဆုံးသူယူ & သင်ထိန်းချုပ်ရေးဆုံးရှုံးတူခံစားရသောအချို့သော Apps ကပရှိပါသလား!
သင့်ရဲ့နာရီ app ကိုသင်ခြေရာခံများနှင့်စီမံခန့်ခွဲသင့်ရဲ့ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်သင်တို့ကိုလည်းဖြစ်ကြောင်းဖုန်းစွဲလမ်း၏အခနျးကဏ်ဍကိုသိကကူညီနိုင်သည်ကိုပျော်စရာနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ features တွေအမျိုးမျိုးပေးသည်!
အဆိုပါသင့်နာရီ App ကို၏အဓိကသော့ချက်များ:
★ အဆိုပါဒိုင်ခွက်: သင်၏တစ်နေ့တာသင်၏တံခါးပေါက်!
YourHour ၏ဒိုင်ခွက်သင်တစ်နေ့တာရှည်လျားဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်လိုအပ်ပါအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ ဒီ app "အချိန်ပေါ်စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်" သင်၏အပေါ်တစ်ဦးကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက် & "စုစုပေါင်းဖုန်းသော့ဖွအရေအတွက်" နှင့်အားဖြင့်, သင့်အတိတ်7ရက်ကြာလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် infographics ပေးသည်။ သင်ပင်အများဆုံးယေဘုယျအားအသုံးပြုမှုအချိန် & သော့ဖွအရေအတွက်သတ်မှတ်နိုင်သည်နှငျ့သငျအနီးအနားမှာကဒီကန့်သတ်ရောက်ရှိဖို့တစ်ချိန်ကဒိုင်ခွက်အရောင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဒါ့အပြင်မစ္စတာအနှေးဒီဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သင်တို့အဘို့အစောင့်ကြို!
★ အဆိုပါဂိုးအစွန်းအကွက်: စွဲသင်၏အဆင့်ကိုသိပါ!
အတိတ်7နေ့ရက်ကာလအဘို့သင်၏ဖုန်းအသုံးပြုမှုများ၏ဒေတာကိုအသုံးပြုခြင်း, YourHour app ကိုသင်လက်ရှိကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis Craver, လေ့, မှီခို, obsessive နဲ့စွဲအဆိုပါစာရင်းငါးခု categories မှဖြစ်ကြောင်းဖုန်းစွဲ၏အခနျးကဏ်ဍကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။
★ အဆိုပါ "နာရီ Timer" by: သင်၏အချိန်စလစ်ကိုကြည့်ပါ!
သင့်ရဲ့နာရီ app ကိုသင်၏အစွဲထဲကသငျသညျအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူမသောသူတဦးဖြစ်သည့်တစ်ဦး Floating "နာရီ Timer" နဲ့လာပါတယ်။ သငျသညျကိုယျအဘို့အားဖြင့်ချော်အချိန်ကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့ apps များအပေါ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ယခု မှစ. , သင် app ကိုဖွင့်လိုက်ပါအခါတိုင်းကျနော်တို့လာမယ့်သူကရန်သင့်အားanice ဒီဇိုင်း ticking "နာရီ Timer" ပြသပါ။ သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာကြောင့် drag and drop အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ apps များကနေ enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်မည်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်အနီးရောက်ရှိအဖြစ်ကြောင့်ပင်, အစိမ်းရောင်ကနေ Amber မှနီမှအရောင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
သင့်အချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်ချင်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျသငျ့ app ကိုအကြောင်းကြားစာများသို့မဟုတ်အခြား app တွေနဲ့တူဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတတ်နိုင်သမျှမွတ်ဆလင်မှာသင်သတိထားမိစောင့်ရှောက်လော့။
★ ရုံကကိုအသာပုတ်: App ကိုအဲဒီကိုအသာပုတ်!
ဒီနေရာတွင်သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်မည်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ထဲကတနေ့လုံး & သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်သုံးစွဲဖူးတဲ့အချိန်ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသော apps များကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ယင်း App ကိုဖွင့် Lifeline ကြည့်ရှုဖို့ app ကိုထိပုတ်ပါ။ ဒီနေရာတွင်လည်း Set အဆိုပါကန့်သတ် option ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ apps များပေါ်တွင်သင်၏အသုံးပြုမှုကန့်သတ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
★ အဘယ်အရာကိုဟင်းချက်ခဲ့ရဲ့: သင်၏ဖုန်းရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်!
အဆိုပါ Timeline ကို * တပြင်လုံးကိုတစ်နေ့ပတ်ပတ်လည်ဟင်းချက်ခဲ့ရဲ့အဘယ်အရာ * တစ် sequential ဒိုင်ယာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ * ရာတဲ့အခါများနှင့်မည်မျှ * အားလုံးသင့်ရဲ့ apps များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအတိုခုနှစ်တွင်စသည်တို့ကို app တစ်ခု, သင်အဲဒီမှာသုံးစွဲသည့်အချိန်, သငျသညျကိုကျော် switched အဆိုပါ app များဖြန့်ချိအချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပေါ်တတ်၏။ သင်သည်သင်၏ပန်းတိုင် fixed ရှိနေဆဲ, ကျော် 10 မိနစ်ကွာကြောင်း screen ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, အဲဒီအခြိနျ * သင့်ရဲ့ * ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်!
★ အဆိုပါအစီရင်ခံစာများ: ကျနော်တို့ကိုသင်သတိပေးပါ!
သင့်ရဲ့နာရီ app ကိုသူတို့ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုမှုများအတွက်နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာကတ်များယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။ The Daily အသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာကို app ကိုနေ့၏ထိပ်တန်း5အများစုမှာတပတ်ရစ် Apps ကပဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦး, ပေါင်းစုအစီရင်ခံစာအကြောင်းကြားစာမှတဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီ app ကိုအဘို့နှင့် app ကိုဖြန့်ချိ count ကအချိန်ကို run အတူတစ်ဦးချင်းစီ apps များပေါ်တွင်အသုံးပြုမှုသုံးသပ်ပြီး။ အဆိုပါအပတ်စဉ်အသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာကိုပြီးခဲ့သည့်7ရက်ပေါင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုအနှစ်ချုပ် & သင်တို့အဘို့ရေတွက်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူလည်းသူကတစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်တစ်ဦးချင်းစီ apps များ & ပစ်လွှတ်ရေတွက်သုံးစွဲထားပြီးဘယ်လောက်အချိန်တွေ့နိုင်ပါသည်။
★ အဆိုပါ Widget လေး: မျက်နှာပြင်တွင်သင့်နာရီ!
YourHour လည်း app ကိုဖွင့်လိုက်ပါသို့မဟုတ်ပင်၎င်းတို့၏ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲရေတွက် & set ပစ်မှတ်ကန့်သတ်သော့ဖွင့်, အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအချိန်ရှုမြင်နိုင်အောင်အိမ် screen ပေါ်မှာ app ကိုဖွင့် widget ကနေရာအသုံးပြုသူကိုထောက်ပံ့ပေး!
အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျအနာဂတျတှငျချင်အရှိဆုံး & အခြား features တွေကြိုက်နှစ်သက်သည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များကိုငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးကကျန်းမာရေးဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝကအသက်ရှင်နေထိုင်စေရန်ခဲယဉ်းကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏နေကြသည်တွေအများကြီး coz ဆိုလို!
စမတ် & Stay ကျန်းမာနေဖို့!
* Empty အပတ်စဉ်အသုံးပြုမှုဘာဂ် fixed!
သင့်ရဲ့နာရီ - ဖုန်းကိုစွဲ tracker နှင့် controller ကို
8.67 ကို MB
Mindefy Labs က